Madeira SGPS ကုမ္ပဏီဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့်ကမ်းလွန်ကုမ္ပဏီများ၏အကျိုးကျေးဇူးများ
Madeira SGPS ကုမ္ပဏီ
တစ်ဦးက Madeira SGPS ကုမ္ပဏီပုဂ္ဂလိကန့်အသတ်တာဝန်ယူမှုကိုကုမ္ပဏီအဖြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တစ်ဦးကိုင်ထားကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နိုင်ငံခြားသား SGPS အတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။ တစ်ဦးကကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီရရှိထားသူများနှင့်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိအခြားကုမ္ပဏီများအတွက်ရှယ်ယာများစီမံခန့်ခွဲ။
ပေါ်တူဂီအတွက်ကုမ္ပဏီ "SGPS" ၏ယင်း၏အတိုကောက်နဲ့ "Sociedade Gestora က de Participações Sociais" အဖြစ်လူသိများသည်။
နိုင်ငံခြားသားများတစ် SGPS ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာအားလုံးပိုင်ဆိုင်စေနိုင်သည်။
Madeira စပိန်ရီကျွန်းစုမှအနီးကပ်ပျေါတူဂီကျွန်းစုပေါ်မြောက်အတ္တလန္တိတ်တည်ရှိသောပေါ်တူဂီတစ်ဦးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ က 1976 ကတည်းကပေါ်တူဂီအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင်တစ်ဦးကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရပြည်နယ်ခဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာတရားဝင်အနေနဲ့ "Madeira ၏ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းဒေသကြီး" ဟုခေါ်သည်။
၎င်း၏နိုင်ငံရေးဖွဲ့စည်းပုံတစ်ဦးကသမ္မတနှင့်အတူတစ်ဦးရွေးချယ်တင်မြှောက်ဥပဒေပြုစည်းဝေးပွဲကိုရှိပါတယ်။ ကပေါ်တူဂီထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်သောကွောငျ့, ကဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ဦးက Madeira SGPS ကုမ္ပဏီအကျိုးခံစားခွင့်ဤအမျိုးအစားများကိုကမ်းလှမ်း:
•နိုင်ငံခြားသားတို့ကအပြည့်အဝပါဝင်လာခြင်း: တစ် SGPS ကုမ္ပဏီအတွက်ရှယ်ယာအားလုံးနိုင်ငံခြားသားများကပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
•အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်: တစ်ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီသကဲ့သို့, SGPS ကလက်ခံတွေ့ဆုံရလဒ်ကိုမအခွန်အခများပေးဆောင်။ သို့သော်အမေရိကန်နေထိုင်သူများနှင့်၎င်းတို့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်မှရှိသမျှသည်အခြားသောဘာသာရပ်မိမိတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
•တစ်ခုမှာရှယ်ယာရှင်များ: တစ်ခုမှာနိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်ဟာ SGPS ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။
•တစ်ခုမှာဒါရိုက်တာ: သာလျှင်တဦးတည်းညွှန်ကြားရေးမှူးပြည့်စုံစီမံခန့်ခွဲမှုထိန်းချုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးတည်းသောရှယ်ယာရှင်နိုင်ပါတယ်သူ SGPS စီမံခန့်ခွဲရန်လိုအပ်ပါသည်။
•ဥရောပသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်: ပေါ်တူဂီ၏တစ်စိတ်တစ်ဒေသအဖြစ်, Madeira သည်အခြားအီးယူအဖွဲ့ဝင်နှင့်အတူစီးပွားရေးအရထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အခွင့်အလမ်းများကမ်းလှမ်းသောဥရောပသမဂ္ဂ (အီးယူ) ၏အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။
•အောက်ပိုင်း Operating ကုန်ကျစရိတ်: Madeira အတွက်တက်ကြွစွာရုံးများထူထောင်နိုင်ငံခြားသားကုမ္ပဏီ operating များအတွက်ကုန်ကျစရိတ်သည်အခြားအီးယူနိုင်ငံများနှင့်တရားစီရင်မှုအတွက်ထက် Madeira အတွက်အများကြီးနိမ့်များမှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားအောက်ပိုင်းကိုမှန်ကန်ဂုဏ်သတ္တိများ purchasing နှင့်ငှားရမ်းများအတွက်စျေးနှုန်းများ, လျှပ်စစ်မီး, တယ်လီဖုန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့်ဒေသခံဝန်ထမ်းများကိုမှပေးဆောင်လုပ်ခများပါဝင်သည်။
Madeira SGPS ကုမ္ပဏီအမည်
အဆိုပါ SGPS Madeira အတွက်အခြားမည်သည့်ဥပဒေရေးရာ entity ရဲ့နာမညျကိုပုံနဲ့တူတဲ့မကုမ္ပဏီအမည်ကိုရွေးချယ်ရမည်။
တိုင်း SGPS ၎င်း၏အမည်ကို၏အဆုံးမှာစကားများ "Sociedade Gestora က de Participações Sociais" သို့မဟုတ်ယင်း၏အတိုကောက် "SGPS" ပါဝင်ရမည်ဖြစ်စေ။
အဆိုပါအဆင်သင့်အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်အရည်အချင်းပြည့်မှီခြင်းနှင့်ရယူနိုင်ရန်အတွက်အဆိုပါ SGPS သာတက်ကြွစွာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံအခြားကုမ္ပဏီများအတွက်ရှယ်ယာများကျင်းပရန်နှင့်မပြုရပါ။ တစ်ဦး "ရံဖန်ရံခါ" ကိုင်ပြီးကုမ္ပဏီဖြစ်ဖို့မအဖြစ် SGPS မှာအနည်းဆုံးတစ်နှစ်များအတွက်ရှယ်ယာကိုင်ထားရပေမည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မဲပေးပိုင်ခွင့်နှင့်အတူအခြားကုမ္ပဏီများ '' အစုရှယ်ယာအနည်းဆုံး 10% ကို SGPS အားဖြင့်ဒါမှမဟုတ် SGPS ကထိန်းချုပ်ထားအခြားကုမ္ပဏီများနှင့် တွဲဖက်. ဖြစ်စေကျင်းပရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါလုပ်ငန်းခွဲမယ့်ရှယ်ယာထက်နည်း 10% ၏ကျင်းပနိုင်ရန်ခွင့်ပြုခြွင်းချက်သို့သော်သူတို့ကဒီမှာရှင်းပြဖို့လည်းရှုပ်ထွေးဖြစ်ကြသည်ရှိပါတယ်။
အဆိုပါ SGPS လျော်ကြေးနှင့်အတူရေးသားထားသောစာချုပ်အောက်တွင်၎င်း၏လုပ်ငန်းခွဲများမှစီမံခန့်ခွဲမှုန်ဆောင်မှုများကိုခွင့်ပြုထားပါသည်။
•သူတို့၏ရုံးခန်းများအဖြစ် မှလွဲ. ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရှယ်ယာမြို့တော်အနည်းဆုံး 10% ကိုင်ထားတဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီအတွက်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ခြံမြေ။
•သူတို့ကိုလေ့လာဆည်းပူးခြင်းတစ်နှစ်အတွင်းရှယ်ယာအကျိုးစီးပွား Encumber သို့မဟုတ်ရောင်းချရန်။
• Non-လက်အောက်ခံကုမ္ပဏီများအားချေးငွေထုတ်ချေးပေးရန်။ သူတို့ကသူတို့ရှယ်ယာအကျိုးစီးပွားသို့မဟုတ်သူတို့ကိုထိန်းချုပ်ထားအခြားကုမ္ပဏီများကိုင်ထားရသောကုမ္ပဏီများအားချေးငွေထုတ်ချေးပေးနိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ SGPS ပထမဦးဆုံးဖြစ်စေပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Lda ။ ) တစ်ခုသို့မဟုတ်အစုရှယ်ယာကုမ္ပဏီ (SA) အဖြစ်ထည့်သွင်းရပါမည်။ ထိုအခါကတစ် SGPS ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီအဖြစ်က register လုပ်သွား။
အဆိုပါပုဂ္ဂလိကလီမိတက်ကုမ္ပဏီ (Lda ။ ) ကိုယ့်တဦးတည်းရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားနိုင်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာမလိုအပ်ပါ။ နိမ့်ဆုံးမြို့တော်ရှယ်ယာရှင်တစ်ဦးလျှင် 1 ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။ တဦးတည်းမန်နေဂျာတစ်ဦးကနိမ့်ဆုံးကုမ္ပဏီစီမံခန့်ခွဲမှုများလုပ်ဆောင်သူကိုခနျ့အပျရမညျ။
အဆိုပါအစုရှယ်ယာကုမ္ပဏီ (SA) 50,000 ယူရိုတစ်နိမ့်ဆုံးမြို့တော်နှင့်အတူတစ်ဦးတည်းသာရှယ်ယာရှင်တွေနဲ့ထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်။ ဒါရိုက်တာတစ်ဦးကဘုတ်အဖွဲ့ကုမ္ပဏီ၏စီမံခန့်ခွဲခန့်အပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ ဆိုင်ရာနည်းဥပဒေမည်မျှအဖွဲ့ဝင် (ရှယ်ယာရှင်များ) ဆုံးဖြတ်သည်အဆိုပါကုမ္ပဏီဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ကိုတက်စေသည်။ ရှယ်ယာမြို့တော် 200,000 ယူရိုထက်ပိုမပါလျှင်တစ်ဦးတည်းသာညွှန်ကြားရေးမှူးလိုအပ်ပါသည်။
ဝင်ငွေများ၏ SGPS အရင်းအမြစ်ယေဘုယျအားဖြင့်သူတို့ကအစုရှယ်ယာကိုင်သောကုမ္ပဏီများအနေဖြင့်ပေးဆောင်ခွဲဝေဖြစ်ပါတယ်။ ခွဲဝေ၏အောက်ပါအမျိုးအစားများကိုအခွန်ကောက်ခံမှုကနေလုံးဝကင်းလွတ်နေသောခေါင်းစဉ်:
1 ။ Dividends တစ် 100% အခွန်နှုန်းကိုအတွက်ရရှိလာတဲ့တစ် 0% အခွန်လျှော့ချရေးခွင့်ရှိသည်ခံတစ်ဦးပေါ်တူဂီ SGPS ကဲ့သို့တူညီသောလမ်းအတွက်ကုသနေကြသည်အီးယူခွဲများထံမှလက်ခံရရှိ;
2 ။ Non-အီးယူခွဲများထံမှလက်ခံရရှိ Dividends;
3 ။ ပေါ်တူဂီ Non-နေထိုင်သူများမှပေးဆောင် Dividends အခွန်ကိုသိုထားသောရန်ဘာသာရပ်မဟုတ်;
4 ။ သူတို့ re-ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေကြတယ်မဟုတ်လျှင်အီးယူခွဲများနှင့်ဆက်စပ်သောမြို့တော်အကျိုးအမြတ်ပုံမှန်ပေါ်တူဂီအခွန်ကောက်ခံမှုမှဘာသာရပ်ဖြစ်ကြသည်။ မြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ငါးတန်းတူနှစ်စဉ်အရစ်ကျပေးဆောင်နေကြ;
5 ။ Non-အီးယူခွဲများနှင့်ဆက်စပ်သောမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ကောက်ခံမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်; နှင့်
6 ။ Madeira IBC ရဲ့ (International Business Center က) အဖြစ် domiciled ခွဲများနှင့်ဆက်စပ်သောမြို့တော်အကျိုးအမြတ်အခွန်ကောက်ခံမှုမှကင်းလွတ်ခွင့်ရသည်။
မှတ်ချက်: အမေရိကန်အခွန်ထမ်းအားလုံးကမ္ဘာတွင်ဝင်ငွေဟာသူတို့ရဲ့ IRS ကို ot သတင်းပို့ရမည်။ အားလုံးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဝင်ငွေအပေါ်အခွန်ကောက်ခံမှုလိုအပ်အခြားနိုင်ငံများမှနေထိုင်သူများ၎င်းတို့၏အစိုးရများအားလုံးကိုဝင်ငွေသတင်းပို့ရမည်။
SGPS ရဲ့ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်းအပေါ်သို့တာဝန်ရှိသူတစ်ဦး certified ရရှိထားပြီးစာရင်းစစ်သို့မဟုတ်စာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီကိုခနျ့အပျရမယျ။ အဆိုပါစာရင်းစစ်အထွေထွေအခွန် Inspector မှမဆိုစွမ်းရည်ညံ့ဖျင်းခြင်းအစီရင်ခံရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
SGPS ရဲ့အထွေထွေအခွန် Inspector ကြိုတင်ဇွန်လ 30 မှနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဘဏ္ဍာရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပါအဝင်ကျင်းပအားလုံးရှယ်ယာများစာရင်းကိုပေးရမည်ဖြစ်သည်။ ။
အဆိုပါ Madeira Registry ကိုနှင့်အတူတင်သွင်းအရာအားလုံးအများပြည်သူသုံးစွဲနိုင်အများပြည်သူမှတ်တမ်းများဖြစ်ကြသည်။
တစ်ဦးကကမ်းလွန်ရေတိမ်ပိုင်းကုမ္ပဏီပိုမိုမြန်ဆန်ဖွဲ့စည်းရေးနှင့်မှတ်ပုံတင် Madeira အတွက်ဝယ်ယူမှုနိုင်ပါတယ် SGPS ။
တစ်ဦးက Madeira SGPS ကုမ္ပဏီကဤအကျိုးခံစားခွင့်ပေးပါသည်: နိုင်ငံခြားသားများအားဖြင့်ပြီးပြည့်စုံသောပိုင်ဆိုင်မှု, ဝါးနိုင်ငံခြားရှယ်ယာရှင်ပိုကောင်းထိန်းချုပ်မှုများအတွက်သာလိုအပ်သောညွှန်ကြားရေးမှူးမျှအခွန်, အီးယူအဖွဲ့ဝင်များနှင့်အများဆုံးအီးယူနိုင်ငံများထက်နိမ့်တဲ့ operating ကုန်ကျစရိတ်ဖြစ်လာပေမည်။